Vaovao - safidio ny rafitra fanondrahana micro, vonjeo ny rano mitete rehetra!
Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity dia firenena maro manondrana vokatra manerantany manerantany no iharan'ny haintany, izay nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny toekarena manerantany.
Ohatra, i Etazonia sy i Brezila dia main-tany main-tany. Ny varimbazaha, ny katsaka ary ny soja dia tratry ny haintany, izay vao mainka nampitombo ny vidin-tsakafo eran-tany. Ankoatr'izay, ny faritra sasany any Rosia sy Kanada koa dia mijaly noho ny hafanana sy ny haintany. Firenena mpamokatra voa manan-danja sy firenena manondrana varimbazaha no miatrika krizy main-tany.
Izany dia mitaky mety kokoa fitarihan-drano fomba sy maro hafa fanondrahana marina fomba, izay afaka mamokatra sakafo bebe kokoa amin'ny rano kely indrindra.
Araka ny antontan'isa, tondra-drano nentim-paharazana fitarihan-dranomitaky rano 60-80 m³ ho an'ny velaran-tany iray hektara, mitaky 40-50 m³ ny fanondrahana famafazana, ary 25-30 m³ fotsiny ny fanondrahana rano mitete. Mazava be ny tombony azo amin'ny fitsitsiana rano!
Amin'ny faritra maina sy avo ny mari-pana, dia diniho ny fampiasana fanondrahana rano mitete ao ambanin'ny tany (izay mampihena be ny fatiantoka etona, ny rano sy ny zezika dia entina mivantana mankany amin'ny faka, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fampiasana avo kokoa; afaka mifehy tsara ny fitomboan'ny tsimparifary izy, mampihena ny habetsany ny herisetra, ary ho sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana; Ny vokatry ny fampiasana fanondrahana rano mitete any ambanin'ny tany amin'ny maripana avo sy ny faritra main-tany dia tena tsara).
Na dia any amin'ireo faritra ampy rotsakorana aza dia mbola afaka misafidy ny fanondrahana na ny rafitra fanondrahana Micro ianao. Ny fanondrahana marina dia tsy tsotra fotsiny toy ny fitsitsiana rano, misy tombony maro, toy ny:
1. Ny fitsitsiana rano, ny fitsitsiana angovo, ny fitsitsiana zezika, ny fitehirizana ny asa, ny zezika dia mety, toerana azo hanohanana ireo voankazo sy legioma avo lenta tsy misy fandotoana;
2. Fehezo ny mari-pana sy hamandoana ambonimbony mba hampihenana ny fahasimban'ny bibikely;
3. Tazomy ny firafitry ny tany, sorohina ny fifangaroan'ny tany, ary koa misy fiantraikany amin'ny fanariana sira;
4. Mihalehibe ny voly, mitovy ny haben'ny voankazo, ary mandeha eny an-tsena mialoha ny voankazo. Ny vokatra dia nitombo mihoatra ny 35%, nampitombo ny fidiram-bolan'ny tantsaha.